Ny tranga toy izany toy ny famonoana dia matetika no voamarika mandritra ny fitondrana vohoka. Noho izany, maro ny vehivavy eo amin'ny toe-draharaha, miatrika io olana io, mieritreritra ny fomba hanesorana ny fatotra, ary nahoana no hita amin'ny ankamaroan'ny vehivavy bevohoka.
Inona no miteraka fatin-jaza amin'ny vehivavy bevohoka?
Io soritr'aretina io dia vokatry ny voka-dratsin'ny hormone progesterone vehivavy iray, izay mampihena kely ny foitran'ny taovam-pananahana. Vokatr'izany dia kely ny sira goavam-be, matetika dia natsipy tao anatin'ny voankazo, indraindray, efa misy sakafo matavy. Na izany aza, amin'ny tranga sasany, ny trangan-javatra toy izany toy ny famonoana ny vehivavy bevohoka, izay sarotra ny manala azy, dia voamarina amin'ny lozan'ny fihinanan-koditra, izay matetika no voamarikao amin'ny zaza vao teraka.
Ao anatin'ireo tranga ireo ny fanolorana ny foetus dia ny fiterahana dia azo tsikaritra satria ny voankazo dia manosika ny lohany hanohitra ny diapragma amin'ny reny hoavy.
Ankoatra izany, ny mpampivelona dia nahatsikaritra fa mety hitera-doza io tranga io rehefa manomana ny hiterahan'ny zaza roa na mihoatra ny vehivavy.
Fizarana fahasamihafana, ilaina ny miresaka momba ny sakafo. Raha ny marina, matetika ny antony mahatonga ny foza dia fihinana, sakafon'ny sakafo, izay tsy tiana mandritra ny fitondrana vohoka.
Ahoana no hialana amin'ny fiterahana?
Vehivavy bevohoka marobe, miatrika fanehoam-pitenenana, dia tsy mahafantatra izay azonao atao amin'ny fisian'ny fanitsakitsahana. Indraindray dia ampy fotsiny ny hanova ny sakafo sy ny manaraka ireto fitsipika manaraka ireto.
Voalohany, ento ny sakafo amin'ny ampahany kely, mampitombo ny isan'ny sakafo isan'andro. Izany dia tsy hanaparitaka ny vavony, izay tsy hanery ny diapragma.
Faharoa, rehefa avy nanoratra prima ianao, mila fotoana bebe kokoa hipetrahana, ary tsy haka fotoana lavalava. Raha tsy izany, ny mety ho fampivoarana ny fitrandrahana izay ny ampahany amin'ny tsiranoka dia tsy maintsy miditra ao amin'ny okimpana ary mety hitera-pahavoazana.
Fahatelo, aza misotro rano be mandritra ny sakafo, satria Izany dia hitarika amin'ny fihenam-bidy ny vanim-potoana marefo, izay hampihena ny fahombiazany. Ilaina ny fisotroana eo anelanelan'ny sakafo.
Inona no tokony hataonao ary inona no zava-mahadomelina misotro amin'ny bevohoka rehefa bevohoka?
Tsy ny vehivavy rehetra no mahafantatra ny fomba hiatrehana ny fisehoan-drivotra sy ny tokony hatao rehefa bevohoka. Tsy voatery foana ny fanafody ilaina, fa afaka atao tsy misy azy ireny.
Noho izany, dia manampy tanteraka ny fanesorana rotsak'orana mahatsiravina - siramamy roa sy brenitra tsy mahafinaritra raha tsy nisy izany. Ny vokatra iray ihany dia manana tsimokaretina, ary koa sokatra karoty.
Fanampiana tsara hiatrehana ny fisehoan'ny voankazo mameno voa maina, indrindra ny hazan-dranomasina, ny hazan-dranomasina, ny manda. Na dia izany aza, dia tsara kokoa ny fisorohana fa tsy fananganana.
Raha miresaka momba ny fanafody isika, dia raiso izy ireo fa ilaina ny bevohoka. Ny zava-mahadomelina toy ny No-shpa sy Papaverine dia manohana ny fihenan'ny tsiranoka hozatra, noho ny tsy fahampian'ny hafenan'ny foitra sy ny fiterahana. Na izany aza, ireo fanafody ireo dia tsy tokony horaisina raha tsy amin'ny tranga manokana, ary aorian'ny fifanarahana amin'ny dokotera.
Mba hiadiana amin'ny fiterahana, dia tsara ny mitondra antacides, izay manala ny asidra ao amin'ny jasan'ny gaza. Ohatra amin'izany fanafody izany ny Maalox, Almagel, Rennie. Ny voka-dratsin'ireny zava-mahadomelina ireny dia ny fihoaram-pefy, ka tsy maintsy ampiasaina amin'ny fampitandremana izy ireo. Amin'ny fotoana iantsoana ireny fanafody ireny, ilaina ny manaiky fa afaka mihinana fanafody hafa ampiasaina amin'ny fotoana mitovy izy ireo. Noho izany, alohan'ny handraisanao zava-mahadomelina hafa, aorian'izay dia tokony handalo fotoan-tsarotra ny antacids.
Eucalyptus amin'ny bevohoka
Ny herinandro 33 herinandro - ny lanjan'ny zaza, ny fitsipika
Embryo 5 herinandro
Fampandrosoana ny embryon
Toetry ny foetus tsy mety
Clotrimazole labozia ho an'ny fahasosorana - fahatelo fahatelo
Chokeberry moka mandritra ny fitondrana vohoka
Ahoana no mitomboan'ny kibo mandritra ny fitondrana vohoka?
Fametavetana fametavetana ho an'ny vehivavy bevohoka
Afaka mandao ny lamosiny ve ny vehivavy bevohoka?
Ginipral nandritra ny fitondrana vohoka
Johnny Depp sy Leonardo DiCaprio
Mick Jagger dia nanipy tovolahy iray tia azy mba hifanerasera amin'ny reniny
Inona no karazana totozy ataon'ny olona?
Ahoana ny fomba fanaovana saribao misy akanjo?
Takelaka fisakafoanana eo amin'ny lakozia
Mamboly hazo iray ho an'ny trano fonenana
Toetra tsy mahazatra
Tea miaraka amin'ny thyme - tombony sy fahasimbana
Ny famokarana currant ao an-trano - recipe
Fitsaboana kanseran'ny tsinay miaraka amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Guacamole sauce - fomba mahazatra
Inona no azonao omena ny zaza ao anatin'ny 7 volana?
Vehivavy ririnina ho an'ny vehivavy 2013
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fizarazarana amin'ilay lehilahy?
Ahoana no handoavana lanja amin'ny horonantsary sakafo?
Bicillin 3 - fampiharana
Romance of Rihanna sy Leonardo DiCaprio - marina sa noforonina?
Divay namboarina avy amin'ny chokeberry - fomba tsotra